Plastika biodegradable: inona avy ireo, toetra sy tombony | Green Renewable
Portillo Alemanina | 06/05/2021 09:07 | fanodinana
Ny plastika no fitaovana mandoto ny tontolo iainana ankehitriny. Navoaka betsaka izy ireo ary manana fampiasana isan-karazany. Manjary fantatry ny olona ny maha-zava-dehibe ny fikolokoloana ny tontolo iainana, saingy tsy ampy izany. Miaraka amin'ity tanjon'ny fiarovana ny natiora ity, ny hevitra momba ny plastika biodegradable. Ireo plastika ireo dia mety ho vahaolana amin'ny krizy lehibe manerantany amin'ny fandotoan'ity fitaovana ity. Na izany aza, ilaina ny mahafantatra tsara ny fetran'izy ireo ary ny antony tsy dia mora ny mametraka ireo plastika ireo amin'ny kaontenera rehetra eto an-tany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra sy ny maha-zava-dehibe ny plastika biodegradable.
1 Inona avy ireo plastika biodegradable
2 Biodegradability sy ekolojia
3 Olana amin'ny plastika biodegradable
Inona avy ireo plastika biodegradable
Ny zavatra voalohany rehetra dia ny fahalalana ny dikan'ny teny hoe biodegradable. Ny biodegradability dia ny lohatenan'ny fanapahana izay nikatso ny vokatra sy ny akora sasany noho ny fihetsiky ny zavamananaina biolojika sasany. Anisan'ireo zavamananaina biolojika izay mety hanimba ny fitaovana ananantsika bakteria, holatra, algga, bibikely, sns. Matetika ireo zavamananaina velona ireo dia mampiasa akora hamokatra angovo sy fitambarana hafa toy ny sela, ny zavamiaina ary ny asidra amine. Amin'izay mba ny plastika dia afaka manimba ny fepetra sasany amin'ny hazavana, ny hamandoana, ny hafanana, ny oxygen, tsy maintsy tojo, Sns Mahafinaritra ka mety hitranga ao anatin'ny fotoana fohy.
Sady tsy karazana plastika izay mety hihena ho azy fa ela loatra, satria amin'ny farany dia hanana olana mitovy amin'ny fanangonana fako ihany isika. Azontsika atao ny milaza fa vokatra biodegradable izy io rehefa azo ravana noho ny fihetsiky ny tontolo iainana sy ireo zavamananaina biolojika monina amin'ny tontolo iainana. Misy karazany maro ny biodegradation miankina amin'ny fisian na tsy fisian'ny oxygen. Etsy andaniny, manana ny biodegradation aerobika izay mitranga izay misy oxygen ao amin'ny rivotra malalaka isika. Etsy ankilany, manana biodegradation anaerobika isika izay mitranga any amin'ny faritra tsy misy oxygen. Amin'ny faharoa, novokarina ny biogas, izay entona entona mampitombo ny fiakaran'ny maripana, fa azo ampiasaina hamokarana angovo ihany koa.
Biodegradability sy ekolojia
Ny biodegradability dia mifandraika matetika amin'ny ekolojia sy ny fahasimbana vokarin'ny plastika amin'ny natiora. Fantatsika fa ny plastika dia maharitra an-jatony taona vao simba ary miankina amin'ny firafitr'izy ireo ihany koa. Ny firafitra sy ny fotoana anaovana ny decomposition dia lafiny iray lehibe tokony hodinihina mba hamaritana ny ambaratongan'ny biodegradability. Hitantsika fa ny hoditr'akondro iray dia maharitra 2-10 andro monja mba hamongorana azy. Ny taratasy dia haharitra 2-5 volana, miankina amin'ny endriny sy ny firafiny. Ireo vokatra ireo dia mora kokoa ny manambany noho ny fonosana izay misy plastika sy taratasy na dia simba aza ny plastika.
Azontsika atao ny milaza fa ny plastika biodegradable dia ireo izay namboarina tamin'ny akora samihafa izay azo havaozina tanteraka. Ireo akora ireo dia ny varimbazaha, katsaka, vovo-katsaka, ovy, akondro, menaka soja na mangahazo. Raha jerena ny fomba famokarana, Ny plastika dia voaaron'ny zavamiaina bitika. Midika izany fa azo averina ao anaty tsingerina voajanahary amin'ny endrika zezika organika mahasoa ny tany izy io. Tsy vitan'ny hoe mahazo fitaovana tsy mandoto isika, fa mahasoa ny tontolo iainana. Ny fotoana fanapotehana dia kely lavitra noho ny plastika mahazatra.
Olana amin'ny plastika biodegradable
Na dia toa tsara tarehy loatra aza izany rehetra izany ary vahaolana amin'ny olana rehetra, dia tsy izany no izy. Na dia ampiasaina aza ny akora voajanahary izay azo averina voajanahary indray, ny plastika biodegradable dia misy olana sasany. Andao hojerentsika hoe inona ireo olana ireo:
Ny fanoratana ireo plastika ireo tsy faritana fa ny fampiasany dia afaka mampihena ny fahalotoan'ny renirano sy ny ranomasina. Ary ny toe-javatra ilain'ireny plastika ireny dia mety hitranga any an-dranomasina sy any an-dranomasina. Izany hoe, raha any amin'ireny toerana ireny no ihafarany, dia afaka mandany taonjato maro izy ireo satria tsy mahita oksizena ampy hanatanterahana ny asany ny zavamiaina bitika miady amin'ny lo.
Na dia tsy dia mila fotoana firy aza ny fanalam-baraka ny tontolo voajanahary dia mety maharitra 3 taona. Ohatra, raha dinihintsika ny famoahana ny diapers sasany mahazatra antsika dia hitantsika fa 350 taona eo ho eo vao ho simba, fa ireo vita amin'ny plastika biodegradable kosa afaka 3-6 taona.
Raha resaka fanodinana indray dia mety olana. Sarotra ihany ny fanodinana azy. Ary ny hoe lasa biodegradable ve tsy azo afangaro amin'ny plastika mahazatra. Midika izany fa paikady fanodinana hafa no takiana amin'ireo vokatra ireo.
Tokony hotadidintsika fa ny famokarana plastika biodegradable dia avy amin'ny loharanon-tsakafo. Midika izany fa na dia voajanahary aza izy ireo ao anatin'ny fotoana fohy, mila velaran-tany midadasika ahafahana mamboly ny vokatra rehetra amboarina. Ho fanampin'izay, ilaina ho an'ny voly, zezika sy rano, izay afaka mampitombo ny fitrandrahana tafahoatra sy ny fandripahana ala ny tontolo iainana voajanahary.
Fepetra manokana: Ireto misy fepetra ilaina, toy ny tranga misy amin'ireo zavamaniry composting indostrialy. Sarotra ny mitazona ireo fepetra ireo amin'ny famokarana plastika marobe.
Ny famelabelarana ireo loharano azo havaozina tsy mampihena ny fampiasana akora simika manimba na additives hahafahan'izy ireo manana endrika sy fampiasana sahaza azy.
Ary farany, ho hitantsika ireo karazana plastika biodegradable roa lehibe misy:
Bioplastika: dia ireo izay azo avy amin'ny akora azo havaozina.
Plastika vita amin'ny additives biodegradable: izy ireo dia karazana plastika izay tsy novokarina ho akora azo havaozina amin'ny fitambarany, fa natao ihany koa amin'ny fitambaran-javatra sasany vita amin'ny petrochemicals izay manatsara ny biodegradation-ny.
Ohatra sasantsasany amin'ny mahasoa azon'ireo karazana plastika biodegradable roa ireto:
Famonosana: dia ireo vita amin'ny plastika biodegradable ary ampiasaina amin'ny fonosana sakafo. Tsy dia mila fotoana firy intsony ny fanapahana noho ny plastika nentim-paharazana ary manampy amin'ny fampihenana ny fandotoana.
Sehatra fambolena: azo afangaro amin'ny palitao voa sy mulch mba hamoahana rakotra tany.
fitsaboana: Safidy hafa amin'ny famokarana vokatra sasany natao ho an'ny fitsaboana izy ireo. Anisan'izany isika manana kapsily simba izay mety ho simba ao anatin'ny vatan'olombelona.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity ianao dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny plastika biodegradable sy ny toetrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » fanodinana » Plastika biodegradable
Izay atsipy ny sarontava